कति विश्वस्त छन् कोरोना खोपप्रति ज्येष्ठ नागरिक?
कति विश्वस्त छन् कोरोना खोपप्रति ज्येष्ठ नागरिक? भन्छन्–खोप लगाएर के हुन्छ कसैले भनेकै छैन
यज्ञराज जाेशी काठमाडाैं - सोमबार, फागुन १०, २०७७
सरकारले यही फागुन २३ गतेबाट ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउँदैछ। आइतबार भारतबाट १० लाख डोज ‘कोभिशिल्ड’ खोप आएसँगै सञ्चालन गरिने दोस्रो चरणको खोप अभियानमा ज्येष्ठ नागरिक प्राथमिकतामा छन्।
तर, यो वर्ग खोपप्रति पूर्ण रुपमा विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन। खोप लगाइसकेपछि ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, बान्ता हुनेजस्ता शारीरिक समस्या हुन्छ भन्ने सुनेका उनीहरू खोपप्रति ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन्। अनि लगाउने कि नलगाउने भन्ने अलमलमा छन्।
अनामनगरकी नरिमाया भुजेल (६५) लाई नेपालमा कोरोनाको खोप आएको थाहै छैन। ‘खै बाबु मलाई नेपालमा खोप आएको, हामी बुढापाकालाई लगाउने भनेको थाहा छैन’, उनले भनिन्।
खोपलाई ‘बुढापाकाको शरीरले थाम्न सक्दैन, ज्वरो आउँछ, खाना रुच्दैन’ भन्ने सुनेकाले उनको मनमा डर छ। खोपले के काम गर्छ भन्ने पनि उनलाई थाहा छैन।
६८ वर्षीय सदानन्द उपाध्यायलाई केही समय पहिले कोरोना भयो। उनले पाँच दिनसम्म निकै सास्ती खेप्नुप-यो। उपचारका लागि मेडिसिटी अस्पताल गए। कोरोना हुँदा टाउको पछाडि निकै दुख्यो। जिब्रोले स्वाद पाएन। पेटमा पनि निकै जलन भयो। अहिले उनले कोरोना जितिसकेका छन्।
तर, उनी खोपप्रति अलमलमा छन्।
यस्तै, भुजेल सरकारले आफूहरूलाई खोपको महत्व बुझाउन नसकेको गुनासो गर्छिन्। ‘हामी फेसबुक, युट्युब चलाउन जान्दैनौं। पत्रिका पढ्न आउँदैन। कसैले पनि खोप लगाउँदा फाइदा हुन्छ भनेका छैनन्’, उनले भनिन्।
उनी आफूलाई खोपप्रतिको विश्वास नभएको बताउँछिन्। ‘सरकारले हामीलाई बुझाउन सकेको छैन। म खोप लगाउँदिन’, उनले भनिन्।
भुजेल जस्तै उपाध्यायको मनमा पनि खोपप्रति अलमल छ। ‘खोप आएकोमा म खुसी छु। कोरोना खोप लगाउनुपर्छ। तर, कोरोना लागेका बुढापाकाले कति समयपछि खोप लगाउन पाउँछन् भन्नेबारे सरकारले बुझाउन सकेको छैन’, उनले भने। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा सरकार कसैले पनि यसबारे जानकारी गराएको आफूले थाहा नपाएको उनको गुनासो छ।
कोरोना भएको निश्चित अवधि पार नहुँदै खोप लगाए कुनै असर गर्ने हो कि भन्ने डर आफ्नो मनमा रहेको उनी बताउँछन्। सरकारले यसमा स्पष्ट पारिदिए आफूले खोप लगाउने उनले बताए।
सरकारले युट्युव, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमार्फत् जानकारी दिने गरेको भए पनि त्यो आफूहरूको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको उनी बताउँछन्। उमेरले आफूहरू अलमलमा रहेको उनी बताउँछन्।
थोरै उत्साह पनि
८२ वर्षका रामबहादुर भण्डारीलाई वृद्धवृद्धाको खोप लगाउने पालो आएको सुनेर खुसी लागेको छ। तर, उनलाई सरकारले कहिलेबाट र कसरी खोप लगाउने हो भन्ने बारे कुनै जानकारी छैन।
उनी आफ्नै जीवन रक्षाका लागि भएकाले सरकारले खोप लगाइदिने बताउँछन्। रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता खोपमा भए आफूले लगाउने बताए।
‘म त सबै थोक रोग बोकेर बसेको छु। रोगी मान्छेलाई असर ग-यो भने बँच्दैन भन्ने सुनेकाले डर पनि लागिरहेको छ। मलाई ब्रोनकाइटिस छ। प्रोस्टेट छ। स्वराइसिस छ। थाइराइड छ। प्रेसर र सुगरको समस्या पनि छ’, उनले भने। उनले त्यही खोप लगाएर बाँचियो भने त केही दिन जीवन लम्बिने बताए।
‘सरकारले खोप लगाएर बस भन्यो भने बस्नै पर्छ। जाउ तिमीहरू भार भयौं भन्यो भने जानुपर्छ’, उनी भन्छन्। उनी जे भए पनि खोप लगाउने बताउँछन्।
दोस्रो चरणमा ५५ वर्ष माथिका नागरिकसँगै क्याम्पस तथा विद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी, सार्वजनिक यातायातका चालक तथा सहचालक खोपको दोस्रो प्राथमिकतामा छन्।
ढुक्क भएर खोप लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय भने त्यो कुरा स्वीकार्दैन। स्वास्थ्यकर्मीसहित तीन लाखभन्दा बढीले खोप लगाइसकेको अवस्था सबैभन्दा ठूलो विश्वासको वातावरण भएको मन्त्रालय जनाउँछ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम विश्व स्वाथ्य संगठनले नेपालमा ल्याइएको खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि सूचीकृत गर्नु पनि विश्वासको बलियो आधार भएको बताउँछन्।
‘१३४ देशले भ्याक्सिनको भ नै भन्न पाएका छैनन्। सबै मानिसको घर–घरमा गएर बुझाउन त सकिँदैन। मिडियाबाट भन्ने हो’, उनले भने।
उनले जीवन र मृत्युको बीचमा खेल्न नमिल्ने बताउँदै उनले भ्रामक समाचार कसैलाई नछर्न आग्रह गरे। उनले सबै वृद्धवृद्धालाई ढुक्कसँग खोप लगाउन आग्रह गर्छन्।
‘६० वर्षभन्दा माथिकालाई कोरोना लागेमा ६/७ प्रतिशतको निधन हुन्छ। त्यो बचाउनु राज्यका लागि ठूलो कुरा हो’, उनले भने, ‘हामी उहाँहरूको घर–घरसम्म पनि मानिस मोबिलाइज गर्छौं।’
उनले वडा स्वास्थ्य कार्यालयहरूमार्फत वृद्धवृद्धालाई खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइने बताए। उनले सरकारले सबैलाई सरल र सहजरूपमा खोप लगाउने दाबी गरे।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १०, २०७७
प्रधानमन्त्री छोडन र बनाउन ओली प्रचण्डका दुःख